चाँड पर्वहरुका प्रकार | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
चाँड पर्वहरुका प्रकार
सञ्चार माध्यमहरुमा अहिले महान चाडपर्वहरुको महिमा गायन सुन्न पाईन्छ । यसका अतिरिक्त अरु कुनै समाचार छैनन् भन्ने जस्तो हुने गरी प्रसारित सामग्री सुनेर देखेर सहर्स विश्वास गर्न मुश्किल पारी रहेको छ । सरकारी आँकडाहरु अनुसार ९२ अरब भन्दा बढीको मासु खपत हुने रहेछ त्यो भन्दा व्यक्तिगत तथ्यांक नभएका मासुको गणना वास्तविक हुने हो भने बढी हुन सम्भाव्य छ । कृषि प्रधान नेपाल देशमा अरु बस्तु झै मासुको आयात छिमेकी हिन्दुस्तान लगायत प्याकेट भएका मासु विश्वका धेरै देशहरुबाट पनि अरबौंको आयात गरिने सरकारी सञ्चार माध्यम समेत प्रसार गरी रहन्छन् । यी र यस्तै समाचार जस्तै खानाका मासु लगायतबाट हुन सक्ने धेरै रोगहरुका सम्बन्धमा सचेत गराएको सुन्दा आश्चर्य भय घृणा अश्रद्धा पनि भरिएर आउँछ । चाडपर्वहरुको नाम मिले पनि खाने मनाउने सोच र प्रवृत्तिहरुमा ठूलो भिन्नता देखिने हुनाले यस सम्बन्धमा समीक्षा गर्न आवश्यक लाग्यो ।
फुलपाती गोर्खा दरबारबाट हनुमान ढोका दरबारसम्म ल्याउने पुजारीहरु पनि फरक फरक हुने रहेछन् मगर जाति लगायतको मात्र होइन गोर्खा पल्टन कोत सरकारी सेना स्वयं राष्ट्रपति समेत तामझामका साथ विभिन्न मन्दिरहरुमा पुजा अर्चना गरेको मुख्य समाचार आए यस सम्बन्धमा राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता परम्परागत भनियो । नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भनेर मूल कानून घोषणा गर्दछ । परम्परा त राजाहरुको सहभागिताको हो । देश गणतन्त्रमा गइसक्यो त्यसैले परम्परा पनि कसरी जिवित रह्यो । गोर्खा दरबार हनुमान ढोका दरबार राजाहरुका जीवन्त प्रतिक हुन त्यही भएर त सैनिक सहभागिता रहने गर्दथ्यो । पदको शफथ ग्रहणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले ईश्वरको नाममा शफथ लिएनन् । प्रचण्ड प्रधामन्त्री हुँदा टाईसुटमा प्रकट भए उपराष्ट्रपति परमानन्द झा त न्यायाधीशबाट डिमोशन भई जन्म भर दौरा सुरुवाल लगाएर जागिर खाए । राष्ट्रपतिको शफथमा त सुरुवाल कमीज सफाचट शीरमा विचित्रको प्रदुशक भेषमा प्रकट भई शफथ विवाद समेत अदालतमा पुग्यो । अव त केपी शर्मा पनि टीका ग्रहण गर्ने र अरुलाई पनि लगाउने अरे । कालखण्डले कुनै मुस्लिक राष्ट्रपति भए परम्परा निर्वाह गर्न पशुपति मन्दिर र देवी स्थलहरुमा पुजा अर्चना गर्न के कसो व्यवस्था रहने होला ? नयाँ मुलुकी संहिताहरुले पशु पंक्षीहरुका सम्बन्धमा कडा कानून नेपाल देशमा लागु भईसुक्यो तर लाखौंको बलि हनुमान ढोका दरबारमा ५४ बोका ५४ रागा बलीको सरकारी खर्चमा भएको व्यवस्था कसरी परिभाषित हुने होला ? कानून व्यवसाय हुँदा ठूलो द्विविधामा परेको छ । दशैका लागि भनेर १ महिना फ्री पेश्गी मिल्ने रहेछ ।
कर्मचारीहरुलाई दशैमा काठमाडौंबाट बाहिरिने ३० लाख बढी भएछन् । अन्य धर्माबलम्बीहरुका क्रिसमस, इद लगायतका पर्व हुन्छन् त्यसमा विभेद किन ? गणतन्त्र धर्म निरपेक्ष भने पनि यस्ता विभेद चाडपर्वका प्रकार भेद कुन अर्थमा लिने नेपाल नामको देशका कतिपय भूभागहरुमा अक्षताका लागि समेत चावल नभएको धेरै नेपाली सार्वभौम खानासम्म नपाई दशै चाडपर्व अर्थहीन बेसरोकार भनि सञ्चार माध्यमहरुमा आएका क्रन्दन ब्वाँसा चिल्ला गाला हर्ष बढाई तामझाम दंभ प्रदर्शनबाट कस्तो परिवेश बन्न गएको हो ? यसको जवाव दिने बारिस कोही भएन यसको विष्फोट कुनै नेताबाट होइन ज्वालामुखीको लावाका रुपमा प्रकट भएर कतिलाई खरानी पार्ला केवल समयको अन्तराल मात्र हो ।
यस प्रकारका नाट्य प्रदर्शनहरुबाट राष्ट्र समृद्धि र उन्नति त के प्रहसनमा नमूना बनेर जान सक्छ ?
दशैलाई महान चाँड भनेर राज्य संयन्त्र निरन्तर बढाई चढाई व्याख्या गरी रहन्छ हाम्रो क्षेत्रमा त नवरात्र भक्तिभाव शुद्ध भोको रहेर पाठ पूजामा देवस्थल पुजिन्छन् । खान पानको प्रकार सम्बन्धि कुनै चिकित्सक वैद्य सचेतना आवश्यक पनि पर्दैनन् । नेपाल भरी नितान्त अन्तर विरोधी प्रचलनहरु संविधान कानून विरुद्धका क्रियाकलाप कसरी राष्ट्रिय एकता स्थापित गर्न सक्छन् । समयमा सचेत नभए कुनै व्यवस्था कामयाव हुने छैन । यो साल पुरा गर्छ गर्दैन ज्वलन्त भएको छ ।
← दशैं मनाउन घर फर्किनेको घुईचो
सेती महाकालीले देबी देवतालाई नुहाउने पर्व विजया दशमी →